Xanax कहिले सम्म रहन्छ? Xanax आधा जीवन र निकासी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन चेकआउट कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, समाचार समुदाय, कल्याण प्रेस कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य कम्पनी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Xanax कहिले सम्म रहन्छ?
यदि तपाईंको चिन्ताले तपाईंको काम र सम्बन्धहरूलाई असर गर्न शुरू गरेको छ वा यदि यो आतंकपूर्ण आक्रमणहरूमा प्रकट भएको छ भने, यो औषधी खोजी गर्ने समय हुन सक्छ। Xanax सामान्यतया सामान्य चिंता र आतंक विकारहरूको उपचार गर्न सिफारिस गरिन्छ जब साइकोथेरापीको साथ प्रयोग गरिन्छ।
यद्यपि यो उपचारको अन्त्य हुने छैन। Xanax छोटो अवधि को उपयोग को लागी यसको लत प्रकृति को लागी निर्धारित गरीएको छ। यस कारणका लागि, यसलाई एक नियन्त्रण पदार्थको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
कुनै पनि औषधि लिनु अघि - एक नियन्त्रित पदार्थलाई एक्लै छोडिदिनुहोस् - यसको प्रभावहरू र यसले कति लामो हुन्छ भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हामी वर्णन गर्दछौ कि Xanax के महसुस गर्नु पर्छ र कस्तो महसुस गर्नु हुँदैन, Xanax कति लामो हुन्छ, र यसलाई कसरी उत्तरदायी रूपमा लिने।
Xanax कस्तो लाग्छ?
Xanax भनिने जेनेरिक औषधि को ब्रान्ड नाम हो अल्पप्राजोलम । Xanax प्रिन्क्रिप्शन ड्रग्स को एक समूह हो जो बेंजोडियाजेपाइन (छोटोका लागि बेंजोस) भनिन्छ, जसमा अन्य औषधिहरू समावेश छन् Valium (diazepam), अटिभन (lorazepam), र Klonopin (क्लोनाजेपाम)।
कसरी बीमा बिना स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न
बेन्जोडियाजेपाइनहरूले मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) लाई ढिलो गरेर काम गर्दछ। Xanax लिनाले केही ड्रग्सले गरेको जस्तो उच्च पार्दैन। जब केन्द्रीय स्नायु प्रणाली शान्त हुन्छ, डिप्रेसन, चिन्ता र आतंक विकार भएका व्यक्तिहरूले शान्त प्रभाव महसुस गर्दछन् जसले उनीहरूको लक्षणहरूलाई राहत दिन मद्दत गर्दछ।
Xanax सबैभन्दा हो सामान्यतया निर्धारित अमेरिकामा साइकोट्रपिक औषधि यसले धेरै व्यक्तिको लागि काम गर्दछ, तर यसले बानी पनि बनाउन सक्छ र यसका धेरै साइड इफेक्टहरू पनि छन्।
सम्बन्धित: Xanax विवरण Alprazolam विवरण | Valium विवरण | अटिभन विवरणहरू Klonopin विवरण
Xanax साइड इफेक्ट
यहाँ Xanax को सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्ट को एक सूची छ:
Xanax अधिक गम्भीर साइड इफेक्ट हुन सक्छ कि चिकित्सा ध्यान आवश्यक छ। यदि तपाईं आत्मघाती विचार, भ्रम, दौरा, वा दुश्मनी को भावनाहरु छ भने तुरुन्त चिकित्सा सल्लाह खोज्नुहोस्। जेहुकै दुर्लभ भए पनि, केहि व्यक्तिको Xanax मा एलर्जी प्रतिक्रिया छ जसले सास फेर्न, अनुहार वा घाँटीको सूजन, र पित्तीहरू पैदा गर्न सक्छ, जसलाई तत्काल चिकित्सकीय सहयोग चाहिन्छ।
मदिराको उपयोग, जब Xanax सँग मिल्दा खतरनाक हुन सक्छ, साइड इफेक्ट खराब गर्न, वा नयाँ स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्न। Xanax लिइरहेको बेला रक्सीको प्रयोग गर्दै दौरा, आक्रामकता, तन्द्रा, बिरामी समन्वय, र भ्रम पैदा गर्न सक्छ। रक्सी र Xanax को संयोजनले बेहोशपन, कोमा, वा मृत्युसमेत गराउन सक्छ।
Xanax लिनुहोस् गर्भवती वा स्तनपानको समयमा। झ्यानाक्सले भ्रुण की असामान्यताहरू निम्त्याउन सक्छ, र यो आमाको दुधमा जान्छ, जसले साना शिशुहरूलाई असर गर्न सक्छ।
Xanax मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Xanax मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
Xanax लाई किक लिन कति समय लाग्छ?
Xanax अन्य साइकोट्रोपिक्सको तुलनामा छिटो काम गर्दछ। यो एक छोटो अभिनय औषधि सजिलै शरीर द्वारा अवशोषित। Xanax लिदा एक घण्टा भित्र काम सुरु गर्दछ।
जे होस् यो छिटो काम गर्न सुरू गर्दछ, Xanax को प्रभावहरु चाँडै बन्द हुन्छ, लगभग five घण्टामा। त्यसकारण, यो एक दिनमा धेरै पटक लिइन्छ।
चिन्ताको विकार भएका वयस्कहरूको लागि Xanax को मानक खुराक 0.25-0.5 मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक हो, अनुसार खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए)। आतंक विकारको साथ वयस्कहरूको लागि Xanax को मानक खुराक ०. mg मिलीग्राम दिनको तीन पटक लिनु सुरु हुन्छ। आवश्यक अनुसार खुराक बिस्तारै बढाइन्छ। यद्यपि डोज व्यापक रूपमा भिन्न हुन सक्छ र आतंक विकारहरूको लागि उच्च हुन जान्छ, न्यूनतम प्रभावकारी खुराक प्रयोग गर्नुपर्दछ।
Xanax XR Xanax को एक विस्तारित रिलीज संस्करण हो जुन प्रति दिन एक पटक मात्र लिनु पर्छ। Xanax र Xanax XR अनिवार्य रूपमा उहि समान हो र तिनीहरू कति लामो समय सम्म काम गर्छन् मा फरक। तिनीहरूसँग उस्तै साइड इफेक्टहरू छन् र उस्तै परिस्थितिहरूको उपचार गर्दछ, जस्तै चिन्ता विकार, आतंक विकार, र डिप्रेसनको कारण चिन्ता।
Xanax XR शरीरमा ११ घण्टा सम्म प्रभावकारी रहन्छ। बिरामीहरूले Xanax XR प्रति दिन मात्र एक पटक लिन्छन् किनकि यो Xanax भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ।
तपाइँको प्रणालीमा Xanax कहिले सम्म रहन्छ?
तपाईको शरीरमा औषधीको मात्रा आधा घटाउन लाग्ने समयको मात्रालाई यसको आधा जीवन भनिन्छ। जे होस् एक खुराक अपेक्षाकृत चाँडै बन्द हुन्छ, Xanax को आधा जीवन लगभग 11 घण्टा छ। अर्को तर्फ, Xanax XR को आधा जीवन १ 15 घण्टा सम्म हुन सक्छ। धेरै कारकहरूले Xanax आधा जीवन लाई असर गर्न सक्दछ, सहित:
मौखिक थ्रश को लागी एन्टिबायोटिक को कारण घरेलु उपचार
उमेर: युवा व्यक्तिहरूले Xanax लाई वयस्कहरूको भन्दा द्रुत रूपमा मेटाबोल गर्नेछन्। Xanax तिनीहरूलाई एक छोटा आधा जीवन हुन सक्छ।
दौड: अध्ययनले देखाउँदछ कि Xanax को आधा जीवन काकेशियाहरूको तुलनामा एशियाईहरुमा १%% -२%% ले वृद्धि भएको छ।
तौल: झ्यानाक्स सामान्यतया अधिक वजन भएका मानिसहरुको लागि लामो समय सम्म रहनेछ किनकि शरीरले औषधि प्रशोधन गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ।
मेटाबोलिज्म: द्रुत मेटाबोलिज्म हुनुको मतलब यो हो कि शरीरले Xanax द्रुत रूपमा प्रक्रिया गर्दछ, समयको मात्रा कम हुँदा यो प्रभावकारी हुन्छ। अंतर्निहित स्वास्थ्य अवस्थाहरू, कलेजो रोग जस्तै, तपाइँको शरीरको Xanax जस्ता औषधी मेटाबोलिज गर्न सक्ने क्षमतालाई असर गर्न सक्छ।
खुराक: Xanax को अधिक खुराक लामो समयको लागि प्रभावकारी हुनेछ, यसको आधा जीवन बढाउने।
म्याद सकिएको औषधि: Xanax दुई वा तीन वर्ष पछि समाप्त हुन सक्छ। एक म्याद सकिएको उत्पादन उपभोग Xanax को आधा जीवन कम गर्न सक्छ।
ड्रग-ड्रग अन्तर्क्रिया:केहि औषधीको साथ Xanax लिने एक अन्तर्क्रिया पैदा गर्न सक्छ कि एक वा अन्य औषधि को प्रभावकारिता मा प्रभाव पार्न सक्छ, र / वा एक वा अर्को औषधीको साइड इफेक्ट खराब हुन सक्छ।
Xanax को आधा जीवन सम्भावित असर गर्न सक्ने औषधीहरु:
निजोरल (केटोकोनाजोल), एन्टिफंगल
Sporanox (itraconazole), एन्टिफंगल
Luvox (फ्लोवोक्सामिन), SSRI OCD को उपचार गर्न प्रयोग गर्‍यो
सर्जोन (नेफेजोडोन), एन्टीडिप्रेससन्ट
E.E.S. (एरिथ्रोमाइसिन), एन्टिबायोटिक
औषधीहरूको सूची विस्तृत छैन। हेल्थकेयर प्रोफेश्नलले तपाईंलाई औषधीहरूको पूर्ण सूची दिन सक्छ जुन Xanax सँग नकारात्मक कुराकानी गर्न सक्दछ।
Xanax वापसी लक्षण
Xanax एक छोटो अवधि को समाधान हो किनभने यसको यसको लत गुणहरु। यसबाट फिर्ता लिनु असहज अनुभव हुन सक्छ किनकि सम्भावित साइड इफेक्टहरूको कारण। केहि औषधि जसले भावनात्मक उच्च बनाउँछ कम्युन्ड प्रभाव हुन्छ। यद्यपि, Xanax केन्द्रीय स्नायु प्रणाली शान्त र शान्तिको भावनाहरू पैदा गर्दछ, यसको मतलब त्यहाँ कुनै कमोडन प्रभाव छैन।
वाल्ट्रेक्स दैनिक को दीर्घकालीन साइड इफेक्ट
केवल किनभने Xanax प्रति से कम कमोडन छैन यसको मतलब यो होइन कि यो फिर्ता ले साइड इफेक्ट पैदा गर्दैन। यहाँ केही सामान्य फिर्ती लक्षणहरूको सूची छ जुन एक व्यक्तिले Xanax लिन रोक्दा हुन सक्छ:
Xanax फिर्ताको अनुभवबाट बच्न उत्तम तरिका भनेको एक मेडिकल प्रोफेश्नलले दिएको निर्देशन अनुसरण गर्नु हो। चिसो टर्की छोड्दा गम्भीर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ, जस्तै दौरा र आत्महत्या विचारहरू, जुन अन्तिम खुराक पछि एक देखि दुई दिन पछि सुरु गर्न सकिन्छ। एक चिकित्सा पेशेवरले बिस्तारै औषधी बन्द गरेर Xanax निकासीको पर्यवेक्षण गर्नु पर्छ।
Xanax मा उच्च स्तरको लागूपदार्थको दुरुपयोग छ। यो सबैभन्दा सामान्य बेन्जोडाइजेपाइन हो जुन ड्रग्सको दुरुपयोगको कारण आपतकालीन कोठाको भ्रमण गर्दछ, लत चिकित्सा जर्नल ।
जब व्यक्ति Xanax मा भावनात्मक र शारीरिक निर्भरता विकास गर्दछ र यो बिना कार्य गर्न सक्दैन, तिनीहरूसँग पदार्थ प्रयोग डिसअर्डर हुन्छ।
यहाँ Xanax बाट पदार्थ प्रयोग डिसअर्डरको केहि संकेतहरू छन्:
Xanax अन्य ड्रगहरूसँग मिल्दै, ओपिएटहरू वा रक्सी जस्ता
Xanax को लागी कडा cravings
साथी र परिवारबाट अलग
Xanax लत उपचार
Xanax छोड्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। चिसो टर्की छोड्नु खतरनाक हो र गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै: एक मनोचिकित्सक वा अन्य चिकित्सा पेशेवरहरूले औषधिको बिस्तार बिस्तारको बिरामीको उपचार गर्नु पर्छ बिस्तारै बिस्तारै र सुरक्षित टेपरबाट औषधि बन्द गर्न।
यदि तपाइँ मनोरञ्जनात्मक रूपमा Xanax प्रयोग गर्नुहुन्छ, Xanax को आदी छन्, वा कसैलाई थाहा छ जो यसको दुरुपयोग गर्दैछ, पदार्थ दुरुपयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासन ( SAMHSA ) तपाईंको लागि स्रोत हुनसक्दछ। १-8००-line62 1--435627 मा यसको राष्ट्रिय हेल्पलाइन कल गर्नुहोस् जो कसैलाई बोलाउन जसले तपाईंलाई स्थानीय उपचार केन्द्रहरू, सहायता समूहहरू, र संगठनहरू जसलाई inpantent detox र psychotherap सुविधा प्रदान गर्न सक्छ।
त्यहाँ सुरक्षित, गैर-आदत-गठन विकल्प Xanax को हो?
सबै औषधीहरू Xanax जत्तिकै बानीको रूपमा बनेका छैनन्। चिन्ताका विकारहरूको उपचारका लागि सुरक्षित विकल्पहरूमा सेरोटोनिन पुनःअपटेक इन्हिबिटरहरू (एसएसआरआई), बुस्पर ( बसपिरोन ), र Vistaril (हाइड्रोक्साइजीन), एक बोर्ड प्रमाणित मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य नर्स व्यवसायी र सहायक मेडिकल निर्देशक हिमाली क्षेत्र उपचार केन्द्र ।
यी औषधी लामो समयसम्म काम गर्न सुरु गर्न सक्दछ तर धेरै व्यक्तिको लागि व्यावहारिक विकल्प हुन्। Xanax र यो तपाइँको लागि सही औषधि हो कि भनेर तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्ने राम्रो तरिका हो।
२०१ state मा प्रत्येक राज्यमा सबै भन्दा निर्धारित औषधिहरू
हाइड्रोकोडोन जस्तै कोडेन संग tylenol छ
भिटामिन डी को कुन खुराक लिनु पर्छ?
गर्भावस्था मा के दुखाई निवारक लिन सक्छु?
मानव शरीर मा सामान्य रक्त शर्करा को स्तर